Mario Villén Lucena. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ Nazarí | Akwụkwọ ugbu a
Foto: Mario Villén Lucena. Facebook profaịlụ.
Mario Villen Lucena, Granada, onye edemede ụdị akụkọ ihe mere eme, ebipụtala akwụkwọ akụkọ ole na ole. Nke ikpeazụ bụ Nasrid, akụkọ ifo gbasara ntọala alaeze ukwu Granada, nke so ya Ọta Granada y 40 ụbọchị ọkụ, dokwara n'oge ahụ. Enwere m ekele maka oge na obiọma ị tinyere na nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na -ekwu maka ha na ihe niile ntakịrị.
Mario Villén Lucena - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Nasrid bụ akwụkwọ akụkọ akụkọ akụkọ ọhụrụ gị. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
MARIO VILLEN LUCENA: Akụkọ a na Nazarí Ahụrụ m ya mgbe m na -ede akwụkwọ maka akwụkwọ mbụ m, ihe karịrị afọ iri gara aga. N'oge ahụ echeghị m na m dị njikere ide ya, mana ka ọtụtụ afọ gachara, mgbe emechara ihe nkiri ahụ, amalitere m ịrụ ọrụ na ya.
N'akwụkwọ a Ntọala nke alaeze Nasrid nke Granada na mmalite nke usoro ndị eze chịrị ya ihe karịrị narị afọ abụọ na ọkara. Onye isi ala Nasrid mbụ bụ Ibn al-Ahmar. Mgbe agha Las Navas de Tolosa gasịrị, o jisiri ike chịkọta ozu al-Andalus wee soro ha mee nnukwu alaeze. N'ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọ malitere iwu Alhambra.
N'akụkụ nke ọzọ nke ókèala ahụ, akụkọ nke Ferdinand III, nke jikọtara Castilla na León n'otu n'otu, wee merie ebe ndị dị mkpa dịka Córdoba, Jaén na Seville.
MGB: Akwụkwọ mbụ m chetara ịgụ bụ Onye na -ese ụkpụrụ ụlọ na eze ukwu Arab. E bipụtara ya na nchịkọta ndị ntorobịa, mana echetaghị m onye dere ya.
Ihe mbụ m dere bụ a uri banyere ọnwụ, na -enwe ntakịrị ihe karịrị afọ 11 ma ọ bụ 12. Obere nwute.
MGB: M ga -ekwu nke abụọ: Amin maalouf y Tariq Ali. Ha abụọ edeela akwụkwọ akụkọ mere eme nke ukwuu, na -elebara ndị na -agụ ya na mmetụta ha anya nke ukwuu. Ọ masịrị m ka ha na -akọ. Ha edeela ihe gbasara al-Andalus.
MGB: Umar, na Na ndò nke mkpụrụ pọmigranet. Ekwesịrị m ikweta na m were ya dịka ntụaka iji wuo otu mkpụrụedemede m n'ime Ọta Granada. Omume ya masịrị m.
MGB: M na -ejikarị egwu ide ihe, iji gbaa m ume na iwepu mkpọtụ na -akpasu iwe. Tụkwasị na nke ahụ, echere m na enweghị mania dị ịrịba ama.
Banyere ọgụgụ m, m na -agụkarị ya Ụdị ihe na m na -achịkwa ya pasent Ịgụ ihe. M na -agba mbọ ịmanye ụda egwu kwa ụbọchị, ana m agbalị ịgbaso ya, mana anaghị m enwe mmasị na isiokwu a.
MGB: Echere m na enweghị oge, ihe ọjọọ nke na -emekarị n'oge anyị, pụtara na anaghị m enwe oke mmụọ ma a bịa n'ịde ihe ma ọ bụ ịgụ ihe. Ebe ọ bụla na oge ọ bụla ha bara uru. Ọ bụrụ na ha nyere m nhọrọ, ọ masịrị m dee ihe mbụ n'ụtụtụ, teta.
MGB: Nke akụkọ ihe mere eme bụ ọkacha mmasị m, mana ọ masịkwara m akwụkwọ akụkọ nke oge a. Agụrụ m ihe niile, mana ugbu a, m chọrọ ide akwụkwọ akụkọ. N'ọdịnihu Anaghị m ewepụ ikpe ịnwale ndị ọzọ okike.
MGB: Ugbu a, m na-agụ Onye na-agwọ ịnyịnya, na Gonzalo Giner. Ahụrụ m ya n'anya.
Anọ m ntụgharị akụkụ nke ihe odide na idekọ maka nke ọhụrụ. Edebere m isiokwu ...
MGB: Anyị na -ebi a siri oge n'ime ụwa mbipụta akwụkwọ. Ọbụna tupu oria ojoo a, ahịa agbanweela. Ndị okpu o meela ma na -aga n'ihu ime nnukwu mmebi. Na Spain ị na -agụ ọtụtụ ihe, mana ị naghị azụta ihe niile ị gụrụ. Ọrịa ọjọọ a emeela ka ọnọdụ ndị nkwusa ka njọ. A ka ga -ahụ nsonaazụ ya, mana ọ dịghị mma. N'uche m, a ga -eme ha nzọ ọzọ echekwa, ọ ga -ewe obere ihe egwu, a ga -eme ka ọsọ a dị mkpụmkpụ ma tinye obere ego na nkwalite.
MGB: Ebipụtara m na June 2020, n'etiti ọrịa na -efe efe, nwere ọtụtụ ụlọ ahịa mechiri emechi yana njikwa ikike ha mepere emepe. Ọ bụ afọ siri ike, mana Nasrid Ọ dịbeghị njọ ma ọlị. Ndi oma n'ime ihe a niile, ihe m chere na anyị wepụrụ n'ọnọdụ a ka o wee dịrị anyị, bụ ihe omume mebere. Ihe ngosi, nzukọ ọmụmụ, mkparịta ụka ... mmachi amanyela anyị ka anyị ụzọ ọzọ na -atọ ụtọ nke ukwuu na ọ ga -amasị m ka ọ gbakwunye omume ọdịnala mgbe ihe a niile mere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Mario Villén Lucena. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede Nazarí